“Miala fa raha tsy izany…”: Na ny endri-pamoretana mahazo ny gazety ao Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
“Miala fa raha tsy izany…”: Na ny endri-pamoretana mahazo ny gazety ao Madagasikara
Voadika ny 02 Aogositra 2009 20:40 GMT
Tanora miasa ao amin'ny fanaovan-gazety lehibe iray i VNR. Nafeniny ny laharam-pindainy tamin'ny voalohany niantsoany ahy haontaniany izay antony hitadiavako tafa aminy. Nanaiky ny hihaona tamiko, teny amin'ny toerana be mpandalo eny Anosy Antananarivo, izy sy ny namany mpanao gazety ihany koa ka eny indray no mijery toerana ahafahana miresaka malalaka. Fomba fiteny fotsiny ny hoe miresaka malalaka fa sady mibitsibitsika izy mirahavavy nandritra ny ora roa niresahana no niherikerika be ihany. Sarotra dia sarotra ankehitriny izany hoe miresaka malalaka izany eto Madagasikara. Be loatra ny fisambotsamborana amin'ny tsy antony nandritra izay volana vitsivitsy izay, be loatra ireo olona miafina noho ny fihazana ireo mpanohitra politika. Efa nisy ny tatitra navoakan'ny Reporters sans frontières amin'ny faneriterena mahazo ny media eto Madagasikara. Mety hoe tsy hita intsony eo amin'ny lohateny lehiben'ny gazety eto an-toerana ny krizy eto Madagasikara. Tsy milaza izany fa tsy misy intsony ny zavatra tokony hotaterina fa eo dia eo ny fangejana mahazo ny mpanao gazety raha vao misy ny fanadihadiana ataony momba ny fihoaram-pahefan'ny mpikambana eo amin'ny governemanta tetezamita, arovan'ny miaramila ankehitriny.
Milaza sompirana ny iray amin'ny olana mianjady amin'ny mpanao gazety eo am-panatontosana ny asany ny mpamaham-bolongana Malagasy Cyber Observer :
Lasa “mpiasa” na mpitondra tenin'ny antoko na hetsika politika ny mpanao gazety any amin'ny ankamaroan'ny firenena afrikana mpiteny frantsay.
Nitafa tamina mpanao gazety 7 izahay nandritra ny 4 herinandro nandalovanay tany an-toerana. Nametraka fepetra any ankamaroan'izy ireo fa hijoro vavolombelona ry zareo rehefa tsy lazaina ny anarana sy momba azy ireo tamin'ny fanadihadiana nataony nefa norarana ny famoahana izany fanadihadiana izany. Miasa amin'ny fanaovan-gazety an-tsoratra ny efatra amin'izy ireo, amin'ny radio ny iray, amin'ny televiziona ny iray ary amin'ny famoaham-baovao an-tserasera ny iray farany. Angom-pijoroana vavolombelona mihitsy amin'ny andavanandrom-piainan'ny mpanao gazety sy ny fomba fijeriny amin'ny fanaovan-gazety ankehitriny eto Madagasikara ity lahatsoratra ity.
Notantarain'iVNR ny rivotra iainana ao amin'ny biraom-pitendrena vaovao ankehitriny:
” Tsy nazoto ny hiresaka aminao izaho sy i TM (namana miasa amin'ny fanaovan-gazety hafa sady mpanolotra vaovao tao amin'ny topmada.com) tamin'ny voalohany satria mihasarotra ankehitriny ny mitady olona azo itokisana ao anatn'ny holafitra. Nilazana aho roa herinandro lasa izay fa safidiko samirery raha hiampanga ny fihoaram-pefy ataon'ny fitondrana ankehitriny aho, fa tsy tokony hiharan'ny vokatry ny safidiko kosa ny ekipa, noho izany dia izaho irery ihany no tompon'andraikitra amin'ny lahatsoratra soratako. Nanadihady ny fandrombahan'ny governemanta ankehitriny ny zava-pihinana ilain'ny mponina vokarina orinasa tsy miankina iray aho. Nanatona ahy ny tonian'ny lahatsoratro fa tsy arendrika miaraka amiko kosa ny gazety, fa raha te-hamono ny asako aho, dia tsy (mahazo alalana) hisintona ny gazety hiara-maty amiko. Efa nanao fanadihadiana tamin'ity tranga iray ity ihany koa i LA, mpiasa amin'ny fanaovan-gazety hafa. Niditra tany amin'ny biraon-dry zareo ny mpitandro ny filaminana dia nilaza mazava tamin'i LA fa : “miala fa raha tsy izany…”. Tsy navoaka manontolo na izay nosoratako na izay nosoratany.”
Nanampy i TM:
“ Nahombiazana haingana dia haingana tokoa ny vohikalam-baovao Topmada.com, izay namoaka haingana dia haingana ny vaovaon'ny mpanao gazety toa ahy. Namoaka vaovao in-droa isan'andro izy hatramin'ny nanombohany tamin'ny ankapobeny saingy tratran'ny fandrahonana ny tompony, vao tsy ela akory izay, ary dia tsy namoaka vaovao intsony izy hatramin'ny fanombohan'ny volana jona. Nandefa lahatsoratra matetika aho saingy nilazana aho tsy hisasatra foana intsony.”
Mazava loatra fa tsy nanaiky ny hampisehoana ny anarany na ny gazety iasany ny mpanao gazety. Fa tsy niraharaha ny hiafin'anarana intsony ny iray amin'izy ireo dia i Evariste Ramanantsoavina, mpanao gazety tao amin'ny Radio Mada teo aloha rehefa notaritaritina ampahibemaso ny anarany. Notantarainy ny fandehan-javatra tamin'ny nisamborana azy tamin'ny 5 mey, sy ny fomba nahafahany ary ny fomba fijeriny momba ny fanaovan-gazety mandritra ny krizy:
Ilay mpanao gazety tao amin'ny radio mada nogadraina. sary: http://pakysse.wordpress.com
“ Mpanao gazety ara-panatanjahantena tsotra aho. Nandritra ny fotoana nampamaivay ny krizy tamin'ny volana marsa dia tsy nisy intsony ny olona nandeha niasa tao amin'ny radio mada hany ka niasa irery aho hatreo. Namaky ny vaovao sy fanambarana nalefa tamiko aho ary ny ankamaroan'ny dia avy amin'ny filoha teo aloha Ravalomanana. Efa antitra sy taizan'aretina aho hany ka tsy maintsy nisintaka kely ny radio mada tamin'ny tapaky ny volana avrily. Naheno aho fa nikaroka ahy ny mpitondra vaovao satria nampianatra ny olona hanao Cocktail Molotov sy hitoraka azy ireny amin'ny mpitandro ny filaminana hoe aho tao amin'ny radio. Lainga marivo tototra io. Tsy niasa intsony aho tamin'ny fotoana nilazana ho nisian'izany fa efa tany Antsirabe nitsabo tena. Rehefa nosamborina aho dia hitsan'ny mpitsara fa tsy ampy ny porofo hitanana ahy dia noafahana aho. Nieritreritra ny hiafina aho hiarovako ny ankohonako rehefa nahare ny tsahotsaho. Saingy nihevitra aho fa tsy misy antony hanaovako izany sady efa antitra koa ny tena hahafahana mandositra. Ny tena nampalahelo ahy dia ny nosoratan'ny mpanao gazety namana momba ny nisamborana ahy tsy nakany ny fomba fijeriko akory. Nokarakaraina tsara aho tany am-pigadrana saingy tsy afa-miteny ny mihoatra izay satria mbola maro ny any am-ponja. Mbola hanoratra ny momba izany rehetra izany aho fa tsy mbola fotoanany aloha izao. Ankasitrahako indrindra ny nataon'ny mpanao gazety namana sasantsasany nanao fitokonana rehefa nahare ny nisamborana ahy sy ireo mpamaham-bolongana nanoratra momba iny raharaha iny. Aorian'ny vahoaka malagasy dia ny marina no tena voa mafy indrindra nandritra ny krizy. Nisy manko ny nanoratsora-poana rehefa izay hahazoany tombotsoa.”
Tsy mitovy ny hevitry ny besinimaro amin'ny antony hitazonana ny vaovao tsy hivoaka sy ny mahatonga ny sasantsasany ao amin'ny media ho tsy dia taitra loatra.
Talen'ny gazety mivoaka isan'andro iray sy mivoaka isan-kerinandro iray sady efa niasa tamin'ny fanaovan-gazety nandritra ny 25 taona i MMR. Nahatsiaro ny fotoana nampamirapiratra ny fanaovan-gazety teto Madagasikara, fony vao naverina ny fahaleovantena, izy. Manontany izy hoe:
“ Mbola mihevitra ny tenany ho hery fahaefatra ihany ve ry zalahy ireo ? Mampihomehy. Efa ela no notandindonin- doza ny fahaleovantenan'ny fanaovan-gazety. Vao niboraka hatramin'ny antsipiriany izany nandritra ny krizy. Misy afa-miteny ve fa matoky tanteraka ny vaovao vakiany amin'izay mitranga eto Madagasikara ? Maro ny antony nahavery izany fitokisana izany saingy tsy nisy ny te-hiresaka momba azy io. Nisy ny fotoana nanatontosa ny andraikitra maha-mpiaro ny demaokrasia azy ny mpanao gazety nandritra ny taompolo 60. Efa dify tanteraka izany fotoana izany ankehitriny. Saino izao, talen'ny famoahan'ny gazety roa aho ary mandray 1.200.000 ariary isam-bolana (tokony ho $618 isam-bolana). mandray eo ho eo amin'ny $320 isam-bolana io ny mpanao gazety vaovao, ary antonony tsara izany raha jerena ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ankoatra izany, sarotra ho an'ny mpanao gazety ny hanana vadin'asa satria maka fotoana be dia be ny fanangonam-baovao. Noho izay toerana misy azy izay dia tsy te-hampidi-doza ny asany ry zareo fa misy aza mpanao gazety vitsivitsy no mitaky vola ho sandan'ny fanginany rehefa mahita vaovao mety hanohintohina ka dia mandeha amin'izay ny resaka ambany latabatra. Nefa, tokony hitoetra ho mihoatra ny maha-foto-pivelomana azy ny fanaovan-gazety saingy very tsy hita intsony moa izany eo amin'ny sehatryny tontolo politika eto Madagasikara ankehitriny”.
Na izany aza dia maro ny trangam-panohintohinana ny fahalalahan'ny gazety ary samy manao izany ny roa tonta mpifanandrina politika.
Nahatsiaro ny andro nidiran'ny miaramila ny birao fiasan'ny MaTV tsy misy taratasy fahazoan-dalana ny mpanao gazety RL miasa ao hikaroka sary mampivandravandra ny fampiasan'ny miaramila basy tafahoatra. Nilaza tamin'ny ekipan'i MaTV ny Komandà Charles Andrianasoavina, ilay nalaza tamin'ny fandrahonana ny diplaomaty vahiny tamin'ny 17 marsa ka anisan'izany ny masoivoho amerikana Niels Marquardt, tsy hamoaboaka sary miaramila intsony fa raha tsy izany dia akatony ny televiziona:
“ Sady tsy sambany no tsy tsiambaratelo io tantara io. Fantatry ny rehetra fa nanemitra ny trano ny miaramila ary nandray ny antotan-taratasy sy fitaovana sasantsasany nolazainy fa hanaovana fanadihadiana. Ankoatra ny fantsona TV manko dia mamoaka gazety an-tsoratra antsoina hoe “Ma Laza” ihany koa izahay ary hatramin'ny nandalovan'ny miaramila dia tsy nisy intsony ny nanasonia tamin'ny tena anarany.”
Tsy amin'ny mpanao gazety ihany no mihatra ny faneriterena ataon'ny miaramila. Ireto mpanao gazety manaraka ireto dia manana tantara manokana momba ny fihoaram-pahefana, fanenjehana sy fisamborana noho ny tondro-molotra, nefa tsy azon'izy ireo navoaka izany. Nanaraka ny fisamborana an'i Heriniaina Razafimahefa, tale mpandrindra ny ALMA, Asa Lalana Malagasy, orinasan'ny filoha teo aloha Ravalomanana ny mpanao gazety zokiolona DN. Nosamborina tamin'ny 16 joonamanko io tale io satria nolazaina ho nanodikodim-bola sy nirobaroba tamin'ny volam-bahoaka. Ren'i DN fa tsy nahazo alalana ny hitsidika azy ny fianakavian'Atoa Razafimahefa telo herinandro lasa izay ary tsy nandrenesam-baovao intsony ny momba io rangahy io hatramin'izao. Maro ny tantara mitovitovy amn'izany amin'ireo niara-niasa tamin'ny filoha (teo aloha) Marc Ravalomanana rahodrahonan'ny miaramila sy angalany vola. TA, mpanao gazety free lance koa dia nahare fa misy manafika ny tranon'ny mpiandraikitra voalohan'ny MAP, tetikasan-d Ravalomanana ary nenjehin'ny miaramila nanodidina an'Antananarivo ny rahalahiny mialoha ny nilefany ivelan'ny tanindrazana.
Maro tamin'ireo vaovao ireo no tsy fantatry ny olona fa nafenina tamin'ny fomba isan-karazany, toy ny tamin'ny alalan'ny fandrahonana, kolikoly na fampitahorana. Tsy vitan'ny hoe tsy mbola tafajoro eto Madagasikara ny kolontsaina tia mangarahara fa mbola atosaky ny fitondrana amin'ny olona ihany koa ny vaovao mampiahiahy ny fahamarinany. Ohatra iray amin'izany ny famoahana ampahibemaso tamin'ny 21 jolay ny anaran'olona dimy, nambara ho atidohan'ny fametrahana baomba ao Antananarivo raha ao nolazaina fa nisy baomba hita ora vitsy mialoha io.
Mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao eto Madagasikara hahafahan'ny mpanao gazety hijoro, hiantohana ny demaokrasia. Nisy ny fotoana mendrika nilazana izany hoe hery fahaefatra izany ny media. Mampanontany tena ihany raha fotoanany izao hitsanganan-ko velona indray avy amin'ny lavenon'ny krizy politika misy ankehitriny.
[ Nosoloina Fanombohan'anarana ny ankamaroan'ny famantarana ny olona ho fiarovana ny ain'izy ireo]
Tsy misy ho kianina fa dia isaorana i Lova namoaka ity lahatsoratra ity. Isaorana Zokibe Jentilisa nandika azy amin’ny teny Malagasy ary ‘Ho tonga anie ny tena Fahafahan’ny asa fanelezam-baovao’
04 Aogositra 2009, 11:22
tena mapalaelo i madagasikara e, Tsy mino mitsy za oe handroso zany i madagasikara na afak 100 taona aza.
hafa ny fijery refa tsy mitondra fa miova tanteraka izany refa mitondra, dia mtovy amin’ny teo aloha ihany…mahavaky fo
13 Aogositra 2009, 20:00
Hiresaka koa -> avylavitra